Venerable Kusalasami: December 2020
A Buddhist Meditation Teacher and lecturer in Goethe Frankfurt University. Now living in Frankfurt, Germany. A founder of Dhammachaya Buddhist Center, Denmark and co-founder of IBEC, Netherlands.
ငြိမ်းချမ်းစေရာ ဓမ္မကထာ (၄) ……… - အရိုးရှင်းဆုံး သီအိုရီ -
ငွိမျးခမျြးစရော ဓမ်မကထာ (၄)
- အရိုးရှငျးဆုံး သီအိုရီ -
လောကမှာ ရှိတဲ့လူတိုငျးကို “မငျး ဘာလုပျနတောလဲ၊ ဘာဖွဈနတောလဲ”လို့ မေးလိုကျရငျ စီးပှားရေး လုပျနတေယျ၊ ငှရှောနတေယျ၊ ဘဝကွငျဖျောရှာနတေယျ၊ စာကကျြနတေယျ၊ ပညာသငျနတေယျ၊ ကားမောငျးသငျနတေယျ၊ ထမငျးစားနတေယျ၊ ခရီးသှားနတေယျ၊ စိတျပကျြနတေယျ၊ ပြျောနတေယျ၊ ကွညျနူးနတေယျ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို အားမလို အားမရဖွဈနတေယျ၊ မကမြေနပျဖွဈနတေယျ၊ သူ့ကို (သားကို၊ သမီးကို) အားမရဖွဈနတေယျ၊ သူ့ကို မကမြေနပျဖွဈနတေယျ … အျော … မြားလိုကျတဲ့ ပညတျတှေ။
တဈလောကလုံးမှာရှိသမြှ “လုပျနတေယျ”ဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျတှကေို အကဉျြးခြုပျလိုကျတဲ့အခါ
၃။ နှာခေါငျးနဲ့အနံ့ကို ရှုရှိုကျနတေယျ၊
၄။ လြှာနဲ့အရသာကို မွညျးစမျးနတေယျ၊
၅။ ကိုယျခန်ဓာနဲ့နူးညံ့မှု၊ ကွမျးတမျးမှုတှကေို ခံစားနတေယျ၊
၆။ စိတျနဲ့အာရုံခံစားမှုတှေ ဖွဈနတေယျ”ဆိုတဲ့
ဝါကြ (၆)ခုကနေ လှတျသှားတာ တဈခုမှ မရှိပါဘူး။
ဒီအသိအမွငျက ဘာမှ မထူးဆနျးသလိုဖွဈနပေမေဲ့ ကိုယျဘာလုပျနတောလဲ၊ ကိုယျဘာဖွဈနတောလဲဆိုတာကို သိမွငျနားလညျအောငျ ကွိုးစားတာဟာ ဗုဒ်ဓဝါဒရဲ့ အရေးအကွီးဆုံးလုပျငနျးစဉျတဈခုပါ။ ဘယျအလုပျပဲဖွဈဖွဈ၊ ဘယျအခွအေနမှောပဲဖွဈဖွဈ ဒီဝါကြ(၆)ခုကို သိမွငျနားလညျနမှေ၊ သတိထားတတျပါမှ ဘဝရဲ့နောကျဆကျတှဲဝါကတြှကေ လှပလာမှာပါ။ တဖွညျးဖွညျးခငျြး အလအေ့ကငျြ့လုပျသှားရငျ မခကျပါဘူး။
ပုထုဇဉျတှလေညျး ဒီဝါကြ(၆)ခုကိုပဲ နစေ့ဉျအသုံးပွုတယျ။ ဘုရားရဟန်တာတှလေညျး ဒီဝါကြ(၆)ခုကိုပဲ နစေ့ဉျအသုံးပွုတယျ။ ပုထုဇဉျတှရေဲ့ဝါကတြှကေ “အကွိုကျနဲ့မကွိုကျ”နှဈမြိုးကွောငျ့ တုနျတယျ။ လှုပျတယျ။ ဘုရားရဟန်တာတှရေဲ့ဝါကတြှကေတြော့ “အကွိုကျနဲ့မကွိုကျ”ကွောငျ့ မတုနျလှုပျတော့ဘူး။
စိတျဓာတျအဆငျ့အတနျး အထကျတနျးမရောကျနိုငျသေးသူတှကေတြော့ “အကွိုကျ”တှရေ့ငျ လောဘနဲ့လှုပျတယျ။ “မကွိုကျ”တှရေ့ငျ ဒေါသနဲ့လှုပျတယျ။ အထကျတနျးကသြူတှကေတြော့ “အကွိုကျ”တှတေဲ့အခါပဲဖွဈဖွဈ၊ “မကွိုကျ”တှတေဲ့အခါပဲဖွဈဖွဈ လောဘနဲ့ဒေါသမဖွဈအောငျ သတိလေးကပျထားနိုငျကွတယျ။ လောကမှာ ငွိမျးခမျြးတဲ့သူ၊ မငွိမျးခမျြးတဲ့သူဆိုတာကို ဒီသီအိုရီကို ဘယျလောကျအသုံးခတြတျသလဲဆိုတာက အဆုံးအဖွတျပေးပါတယျ။
၂ရ ဇှနျ ၂ဝ၁၈
ငြိမ်းချမ်းစေရာ ဓမ္မကထာ (၄)
- အရိုးရှင်းဆုံး သီအိုရီ -
လောကမှာ ရှိတဲ့လူတိုင်းကို “မင်း ဘာလုပ်နေတာလဲ၊ ဘာဖြစ်နေတာလဲ”လို့ မေးလိုက်ရင် စီးပွားရေး လုပ်နေတယ်၊ ငွေရှာနေတယ်၊ ဘဝကြင်ဖော်ရှာနေတယ်၊ စာကျက်နေတယ်၊ ပညာသင်နေတယ်၊ ကားမောင်းသင်နေတယ်၊ ထမင်းစားနေတယ်၊ ခရီးသွားနေတယ်၊ စိတ်ပျက်နေတယ်၊ ပျော်နေတယ်၊ ကြည်နူးနေတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမလို အားမရဖြစ်နေတယ်၊ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတယ်၊ သူ့ကို (သားကို၊ သမီးကို) အားမရဖြစ်နေတယ်၊ သူ့ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေတယ် … အော် … များလိုက်တဲ့ ပညတ်တွေ။
တစ်လောကလုံးမှာရှိသမျှ “လုပ်နေတယ်”ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကို အကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါ
၃။ နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကို ရှုရှိုက်နေတယ်၊
၄။ လျှာနဲ့အရသာကို မြည်းစမ်းနေတယ်၊
၅။ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့နူးညံ့မှု၊ ကြမ်းတမ်းမှုတွေကို ခံစားနေတယ်၊
၆။ စိတ်နဲ့အာရုံခံစားမှုတွေ ဖြစ်နေတယ်”ဆိုတဲ့
ဝါကျ (၆)ခုကနေ လွတ်သွားတာ တစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။
ဒီအသိအမြင်က ဘာမှ မထူးဆန်းသလိုဖြစ်နေပေမဲ့ ကိုယ်ဘာလုပ်နေတာလဲ၊ ကိုယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကို သိမြင်နားလည်အောင် ကြိုးစားတာဟာ ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါ။ ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဝါကျ(၆)ခုကို သိမြင်နားလည်နေမှ၊ သတိထားတတ်ပါမှ ဘဝရဲ့နောက်ဆက်တွဲဝါကျတွေက လှပလာမှာပါ။ တဖြည်းဖြည်းချင်း အလေ့အကျင့်လုပ်သွားရင် မခက်ပါဘူး။
ပုထုဇဉ်တွေလည်း ဒီဝါကျ(၆)ခုကိုပဲ နေ့စဉ်အသုံးပြုတယ်။ ဘုရားရဟန္တာတွေလည်း ဒီဝါကျ(၆)ခုကိုပဲ နေ့စဉ်အသုံးပြုတယ်။ ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ဝါကျတွေက “အကြိုက်နဲ့မကြိုက်”နှစ်မျိုးကြောင့် တုန်တယ်။ လှုပ်တယ်။ ဘုရားရဟန္တာတွေရဲ့ဝါကျတွေကျတော့ “အကြိုက်နဲ့မကြိုက်”ကြောင့် မတုန်လှုပ်တော့ဘူး။
စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်း အထက်တန်းမရောက်နိုင်သေးသူတွေကျတော့ “အကြိုက်”တွေ့ရင် လောဘနဲ့လှုပ်တယ်။ “မကြိုက်”တွေ့ရင် ဒေါသနဲ့လှုပ်တယ်။ အထက်တန်းကျသူတွေကျတော့ “အကြိုက်”တွေ့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ “မကြိုက်”တွေ့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် လောဘနဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင် သတိလေးကပ်ထားနိုင်ကြတယ်။ လောကမှာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူ၊ မငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဆိုတာကို ဒီသီအိုရီကို ဘယ်လောက်အသုံးချတတ်သလဲဆိုတာက အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။
၂၇ ဇွန် ၂ဝ၁၈
Posted by ashin kusalasami on December 27, 2020 No comments:
ငွိမျးခမျြးစရော ဓမ်မကထာ (၃)
- အတှေးအလဉျြတှကေို သတိထားပါ -
သဘောတရားတှကေို မှနျမှနျကနျကနျ သုံးသပျပွီး တညျငွိမျတဲ့ အပွုအမူ၊ အပွောအဆိုတှဖွေဈလာရေးဟာ လူတိုငျးအတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။ ဘဝမှာ အောငျမွငျဖို့အတှကျ လောကီမှာဆိုရငျလညျး တကျကမျြးတှေ၊ နညျးလမျးတှကေို သုံးတယျ။ အမှီအခိုပုဂ်ဂိုလျတှရေဲ့စကားကို နားထောငျတယျ။ လောကုတ်တရာမှာဆိုရငျလညျး ဘာသာရေးစာအုပျတှပွေောတာကို လိုကျနာတယျ။ ဆရာတှပွေောတာကို လိုကျလုပျတယျ။ ဒါတှကေ သူ့အတိုငျးအတာနဲ့သူ အရေးပါတာ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဆရာ(စာအုပျ)ကို အားကိုးတဲ့နရောမှာ လှဖေောငျတှကေို ဘယျလိုလှျောခတျရမယျဆိုတာကို ပွောပွပေးသူအဆငျ့မြှပဲ အားကိုးရပါမယျ။
အမှနျက ကိုယျ့ရဲ့ကွိုးစားအားထုတျမှု၊ ကိရိယာတှကေို အသုံးခတြတျမှု တဈနညျးပွောရရငျ ကိုယျပိုငျအတှအေ့ကွုံကိုပဲ အားကိုးရပါတယျ။ ဒါမှ ဘုရားနညျးပါ။
စာအုပျတှနေဲ့စာအုပျကပွောတဲ့အရာတှကေ တဈဆငျ့ခံအရငျးအမွဈတှေ (Secondry Sources)ပါ။ ကိုယျတိုငျသိမွငျရတာတှကေမှ တကယျ့အရငျးအမွဈ (Primary Sources)တှပေါ။
စာသိနဲ့ကွားသိက ဉာဏျသိဆီကို ရောကျမလာရငျ သူ့မူလစာအုပျ၊ မူလပွောသူဆီပဲ ပွနျရောကျသှားတာ။ ဉာဏျသိက စာထဲမှာ မရှိဘူး။ ပွောသူစကားမှာ မရှိဘူး။ ဉာဏျသိက ကိုယျပိုငျအတှအေ့ကွုံ(Personal experience)ထဲမှာပဲ ရှိတာပါ။ ဗုဒ်ဓဘာသာရဲ့ ဒီအမွငျ(Concept)က လောကုတ်တရာရေးအတှကျသာ ကောငျးတာမဟုတျဘူး။ လောကီအဆငျပွရေေးအတှကျလညျး အရေးပါတယျဆိုတာကို ဆငျခွငျကွညျ့ဖို့ လိုအပျတယျ။
ဘဝမှာ ငွိမျးခမျြးစဖေို့ သစ်စဓမ်မကို လိုအပျတယျဆိုရငျ အဲဒီသစ်စဓမ်မဟာ ကိုယျစီစိတျကူးတှထေဲမှာ တညျနတေယျဆိုတာ သိဖို့ လိုတယျ။ မွငျ၊ ကွား စတာတှကေနေ အခြိနျတိုငျး ဖွာထှကျနတေဲ့ အတှေးအလဉျြတှကေို သတိထားရမယျ။ ဒီအတှေးအလဉျြတှကေပဲ ကိုယျ့ဘဝကို ပုံဖျောမှာ။ ငွိမျးခမျြးတဲ့အတှေးအလဉျြတှကေသာ ငွိမျးခမျြးတဲ့ဘဝကို ဖွဈပျေါစမှောပါ။
ငြိမ်းချမ်းစေရာ ဓမ္မကထာ (၃)
- အတွေးအလျဉ်တွေကို သတိထားပါ -
သဘောတရားတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေဖြစ်လာရေးဟာ လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် လောကီမှာဆိုရင်လည်း တက်ကျမ်းတွေ၊ နည်းလမ်းတွေကို သုံးတယ်။ အမှီအခိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားကို နားထောင်တယ်။ လောကုတ္တရာမှာဆိုရင်လည်း ဘာသာရေးစာအုပ်တွေပြောတာကို လိုက်နာတယ်။ ဆရာတွေပြောတာကို လိုက်လုပ်တယ်။ ဒါတွေက သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ အရေးပါတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာ(စာအုပ်)ကို အားကိုးတဲ့နေရာမှာ လှေဖောင်တွေကို ဘယ်လိုလှော်ခတ်ရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးသူအဆင့်မျှပဲ အားကိုးရပါမယ်။
အမှန်က ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ကိရိယာတွေကို အသုံးချတတ်မှု တစ်နည်းပြောရရင် ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုပဲ အားကိုးရပါတယ်။ ဒါမှ ဘုရားနည်းပါ။
စာအုပ်တွေနဲ့စာအုပ်ကပြောတဲ့အရာတွေက တစ်ဆင့်ခံအရင်းအမြစ်တွေ (Secondry Sources)ပါ။ ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရတာတွေကမှ တကယ့်အရင်းအမြစ် (Primary Sources)တွေပါ။
စာသိနဲ့ကြားသိက ဉာဏ်သိဆီကို ရောက်မလာရင် သူ့မူလစာအုပ်၊ မူလပြောသူဆီပဲ ပြန်ရောက်သွားတာ။ ဉာဏ်သိက စာထဲမှာ မရှိဘူး။ ပြောသူစကားမှာ မရှိဘူး။ ဉာဏ်သိက ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ(Personal experience)ထဲမှာပဲ ရှိတာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဒီအမြင်(Concept)က လောကုတ္တရာရေးအတွက်သာ ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ လောကီအဆင်ပြေရေးအတွက်လည်း အရေးပါတယ်ဆိုတာကို ဆင်ခြင်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်တယ်။
ဘဝမှာ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ သစ္စဓမ္မကို လိုအပ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီသစ္စဓမ္မဟာ ကိုယ်စီစိတ်ကူးတွေထဲမှာ တည်နေတယ်ဆိုတာ သိဖို့ လိုတယ်။ မြင်၊ ကြား စတာတွေကနေ အချိန်တိုင်း ဖြာထွက်နေတဲ့ အတွေးအလျဉ်တွေကို သတိထားရမယ်။ ဒီအတွေးအလျဉ်တွေကပဲ ကိုယ့်ဘဝကို ပုံဖော်မှာ။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့အတွေးအလျဉ်တွေကသာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာပါ။
ငြိမ်းချမ်းစေရာ ဓမ္မကထာ (၄) ……… - အရိုးရှင်းဆုံး သ...
ငြိမ်းချမ်းစေရာ ဓမ္မကထာ (၃) … - အတွေးအလျဉ်တွေကို ...
Meerholzerstraße 33, 60386, FRANKFURT AM MAIN
2500 - ဗုဒ်ဓသို့ အလှမျး
မြိုးဆကျသဈ ငါ့ရှငျငယျမြားသို့ (၅)
Tawfik Hamid ရဲ့ From the heart ofaMuslim
(Tawfik Hamid ရဲ့ From the heart ofaMuslim ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ပါတယ်။) ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့် ယုံကြည်ချက်နဲ့ မွတ်စလင်တစ်ယောက်ြ...
Zawgyi/Unicode ငွိမျးခမျြးစရော ဓမ်မကထာ (၃) ……………………………………………… - အတှေးအလဉျြတှကေို သတိထားပါ - ……………………………….. သဘောတရားတှကေို မှနျမှနျကနျကနျ သုံ...